Galaxy Grand GT-i9082 4.2.1 ကို Root လုပ်နည်း | IT Sharing Network
ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီးရလာသောဖိုင်ထဲက update.zip ဖိုင်ကို sd card ထဲထည့်ပါ။ ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်ပြီး sd card ကိုဖုန်းထဲထည့်ပါ။ download mode ၀င်ထားပါ့မယ် odin ကိုဖွင့်ပါ။ pda မှာ CWM-touch_i9082.tar.md5 ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ။
volume down+Home+power နှိ်ပ်ပါ။ downloading mode ရောက်ရင် ဖုန်းကိုကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်လိုက်ပါ။ ID:Com မှာ အပြာနုရောင်လေးလင်းရင် ကွန်ပျူတာက သိပါပြီ။
repartation ကို အမှတ်မခြစ်ပါနဲ့ ပြီးရင်တော့ ဘာမှမပြောင်းပါနဲ့ start သာနှိပ်လိုက်ပါ. reset ပြီး pass တို့ပေါ်လာရင် ပြီးပါပြီး။
အဲဒီအဆင့်ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကို ပါဝါပြန်ပိတ်လိုက်ပါ recovery mode ၀င်ပါ့မယ်
volume up + Home + power ပါ။ recovery mode ရောက်ရင် install from sd ကနေ update.zip ဖိုင်လေးရွေးပေးလိုက်ပါ။ သူဖာသာ root လုပ်သွားပါလိမ့်မယ် main menu ပြန်ရောက်သွားရင်တော့ reboot system now ကိုရွေးပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဖုန်းပြန်တတ်လာရင်တော့ root လုပ်ပြီးသော ဖုန်းတစ်လုံးကို သူငယ်ချင်းများပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။
မြန်မာစာ သွင်းဖို့အတွက်ကတော့ mpx font လေးကအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါကတော့ အကြံပေးတာပါ. မိမိကြိုက်တဲ့ဖောင့်လေးကိုသွင်းနိုင်ပါတယ် ။ ကျွန်တော်ကတော့ zawgyi installer လေးပဲသွင်းပါတယ်။
www.myanmarmobilesoftwaredeveloper.com မှ ပြန်လည်ဝေမျှပေးတာဖြစ်ပါခင်ဗျာ။